यो खोप सुरक्षित छ भनेर हामी कसरी जान्दछौं? - कोभिड - १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
द्वारा TakeTheCOVID-19VaccineC अभियान अभियान | जन २२, २०२१ | प्रश्नहरू मैले खोप लिनु अघि, वर्गीकृत | ० टिप्पणीहरू
खोपहरू कसरी सिर्जना हुन्छन्?
कुनै पनि नयाँ औषधि जस्तै, खोपहरू क्लिनिकल परीक्षणहरूमा विकास र परीक्षण गरिन्छ। यि परीक्षणहरू फरक-फरक चरणहरू हुन्छन् यदि ती कार्य गर्दछन् र यदि ती व्यक्तिमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छन् भने। खोपको क्लिनिकल विकास चरणहरूमा भनिने चार चरणमा लिन्छ। सुरक्षा अनुगमन सबै चरणहरूमा हुन्छ, एक खोप व्यक्तिमा प्रयोगको लागि अनुमोदित भएपछि सहित।
सिद्धान्त सानो सुरु गर्नु हो र परीक्षणको अर्को चरणमा जानका लागि यदि त्यहाँ कुनै उत्कृष्ट सुरक्षा चासो छैन भने।
भ्याक्सिन सुरक्षाको आकलन गर्दै
स्वस्थ व्यक्तिहरूको एउटा सानो समूहलाई (<१००) कुनै सुरक्षा चिन्ता नभएको कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि यो खोप दिइन्छ, यसले प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रियालाई कत्ति राम्रोसँग उत्प्रेरित गर्दछ र एक प्रभावकारी खुराकको परिश्रम गर्न।
खोप एक ठूलो समूह (धेरै सयौं) मा परीक्षण गरीन्छ कि खोप लगातार कार्य गर्दछ कि गर्दैन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मूल्या assess्कन गर्न र साइड इफेक्ट र प्रतिकूल घटनाहरूको खोजी गर्न।
खोप प्राकृतिक बिरामी अवस्थामा धेरै ठूलो मात्रामा (हजारौं व्यक्ति) अध्ययन गरिन्छ। यसले दुर्लभ साइड इफेक्ट र प्रतिकूल घटनाहरू पहिचान गर्न र खोप वास्तविक संसारमा कत्ति राम्रोसँग काम गर्दछ भनेर मूल्या ;्कन गर्न पर्याप्त डाटा उत्पादन गर्दछ; के यसले रोग प्रतिरोध गर्न र कम गर्न पर्याप्त प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न गर्दछ?
चरण3र manufacturers बीचमा निर्माताहरूले नियामकहरूबाट इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन्छन् ताकि उनीहरूको खोप मानव उपयोगको लागि मार्केटिंग गर्न सकिन्छ। विज्ञहरूले सबै डेटा समीक्षा गर्छन् कि खोप दुबै सुरक्षा र रोग को कम गर्न यसको प्रभावकारिता दुवैको लागि आवश्यक मापदण्डमा काम गर्दछ।
चरण clin क्लिनिकल परीक्षणहरू नियामक स्वीकृति प्राप्त भएपछि हुन्छन्। यस चरणमा हजारौं सहभागीहरू सम्मिलित छन् र धेरै वर्षसम्म रहन सक्दछन्। अन्वेषकहरूले यस चरणको प्रयोग औषधिको दीर्घकालीन सुरक्षा, प्रभावकारिता, र कुनै पनि अन्य सुविधाहरूको बारेमा बढी जानकारी प्राप्त गर्नका लागि गर्दछन्। चरण trial परीक्षणलाई "पोष्ट बजार निगरानी" को रूपमा पनि चिनिन्छ र नामले देखाउँदछ कि यो औषधि पहिले नै बजारमा ल्याईएको छ र आम जनताको लागि उपलब्ध छ।